Nhau - Florescence Tubes Inochengetwa Negore Seaside Barbecue Chiitiko
Florescence machubhu akabata yegore rega yegungwa bhengi chiitiko neMugovera. Taitamba mitambo pamwe chete, tichigocha, uye tichiimba uye tichitamba takakomberedza moto wemusasa. Shamwari zhinji dzekune dzimwe nyika dziri kungoitawo mumitambo yedu uye zviitiko. Tinoda zvigadzirwa zvedu uye nebasa redu, isu tinodawo iro rebhuruu denga, makore machena, gungwa, tinoda vedu tese kubatsirana vatinoshanda navo, kuda yedu inoenderera inodziya mhuri yeFlorescence, kuda vedu shamwari dzekunze uye vatinoshamwaridzana navo vanobva kure. Iri ibasa rakakura uye ndinotarisira kuti ubatane nesu gore rinouya!
Florescence machubhu anotarisira kuve nevatengi vazhinji kuti vauye kuzoshanyira guta redu nekambani, uye vane mukana wekujoinha nesu kutamba mitambo, kuziva zvakawanda pamwe chete uye kufara pamwe chete, tarisiro yekuchengeta bhizimusi renguva refu nemumwe nemumwe. Zvichakadaro isu tichagadzira mukana wakawanda wekuenda kuguta revatengi nekambani kunotaura uye kuziva zvakawanda zvavanoda, kugadzirisa uye kuwedzera chigadzirwa chedu uye mhando yezvigadzirwa zvedu nebasa. Kutarisa kumberi ramangwana rakajeka nevatengi pamwe chete.
Qingdao Florescence Co, ltd inyanzvi yemukati chubhu inogadzira ine anopfuura makore makumi maviri nemaviri chigadzirwa ruzivo. Chigadzirwa chedu chinonyanya kusanganisira butyl yerabha yemukati machubhu emotokari, mainjiniya machubhu uye rabha rairo nezvimwewo kambani yedu ine vashandi mazana matatu (kusanganisira vashanu mainjiniya, makumi mana evapakati uye vakuru vehunyanzvi nevashandi vehunyanzvi) .Ikambani ibhizimusi rakakura iro rakazara nhasi kutsvagisa nekusimudzira, kugadzira, kutengesa uye sevhisi. Zvigadzirwa zvedu zvinoendeswa kune dzinopfuura nyika makumi maviri pasirese, zvinofarirwa nevatengi vekunze nekune dzimwe nyika. Zvakare, isu takapfuura ISO9001: 2008 kubvumidzwa uye isu zvakare tine yazvino uye yesainzi manejimendi sisitimu iyo inopa mhando yepamusoro zvigadzirwa uye zvine basa masevhisi. Tiri kutarisira kumisikidza kwenguva-inowirirana inobatsira bhizinesi hukama nevatengi vedu.